Nhau - Iyo 22nd Russia Yepasi Pose Chikafu Zvekudya Zvinongedzo Exhibition 2019
Yegumi nembiri Russia Yepasi Pose Chikafu Zvekushandisa Zviratidziro 2019
Fujian Global Ocean Biotechnology Co., Ltd yakatora chikamu pakuratidzira, ichiratidza zviri nani kutengesa zvigadzirwa uye mifananidzo yekambani. Semumwe wemusika mukuru wekushandisa weagar uye carrageenan, yaive yedu yechipiri kuzvizivisa isu kune vatengi veRussia. Isu tanga tichitumira kunze kwedu agar kuRussia neUkranie, budiriro huru ndeyekuti isu takawana yedu yega yekuparadzira kudyidzana nevatengi vedu veRussia neUkraineinie.
Exhibition nguva: Kukadzi 19-22, 2019
Nzvimbo yekuratidzira: Moscow, Russia
Zviratidzo zvekuratidzira: Agar & Carrageenan
Dumba hapana .:B612
Zvinosanganisira Russia Exhibition (MOTO) yakaitirwa neITE Boka PLC kuUK. Chiratidziro chakaitwa kubvira 1998, mushure memakore makumi maviri ekuvandudza kunaya, chiratidziro chave chakanyanya kutungamira muRussia, chete zvinowedzerwa zvekudya uye zvigadzirwa zvekuratidzira kwehunyanzvi, radiation mukati me aimbove mubatanidzwa weSoviet, Russia bazi rezvekurima, hupfumi hweRussia uye kusimudzira kwekutengeserana, rutsigiro rwemasangano eRussia ehurumende akadai seanowedzera chikafu.
Kwemakore mazhinji, chikafu chave chiri chetsika chihombe chekutenga zvinhu muRussia, chichiverenga chikamu chimwe nechimwe chezvinhu zviripo, chinzvimbo chechipiri chete kumachina nemidziyo uye nzira dzekufambisa (kuverenga chikamu chinosvika makumi matatu nezvishanu kubva muzana chese chakatumirwa) muzvikamu zvese zve kupinza zvinhu. Vanhu veRussia vanovimba zvakanyanya nechikafu chakatengwa kunze muhupenyu hwezuva nezuva Parizvino, huwandu hwekugadzira hweRussia yekumba yezvigadzirwa zvekudya indasitiri iri pasi pe50% yehupenyu hwenyika hunodiwa, uye inenge 90% yezvakawedzerwa pamusika zvinotengwa kubva kunze kwenyika. Russia yakaratidza kuve musika unokwezva kwazvo wezvinhu zvekugadzira mabhizinesi.Semutengesi mukuru wezvokudya, zvekudya zvekuwedzera uye zvinowedzera, China ine mukana wakakura maererano nemutengo wekuita kuRussia, uye huwandu hwayo hwekutengesa huri kuwedzera gore negore. Kunyanya, mapuroteni emuriwo, soya protein, stevia, miriwo isina mvura uye zvimwe zvigadzirwa zvinogamuchirwa nevatengesi veRussia.
● Shuga ine manyuchi uye manyuchi
● Zvigadzirwa zvakabikwa uye madhiri
● Mafuta, zvinotsiva mafuta nemafuta anodyiwa
● Sauces uye zvinwiwa
● Mweya, liqueur newaini
● Zvigadzirwa zveSoy
● Michero, muriwo nenzungu
● Kutanga tsika
● Midzimu, zvidhakwa newaini
● Vanopa rubatsiro
● Colloids uye starch
● semi-apedza zvigadzirwa